Taariikhada Norwey oo kooban | Samfunnskunnskap.no
Sannadadii u dhexeeyay 800 iyo 1050 nebi Ciise kadib ayaa loogu yeedhaa waqtigii vikinka. Bilowgii waqtigii vikinka Norwey may aheyn dal, laakiin waxey ka koobneyd dalal yaryar oo mid kastaa boqorkiisa leeyahay. Sannadkii 872 ayaa nin viking ah oo lagu magacaabi jirey Harald Hårfarge Norwey oo dhan u noqday boqor. Dad badan oo vikinka ka mid ahaa ayaa u safri jirey dalal kale. Qaar vikinka ka mid ahi waxay ahaayeen ganacsato oo waxna iibsada waxna iibiya, kuwa kalena waxey ahaayeen kuwo waxna dhaca waxna dila. Maanta waxaynu ka fekernaa had iyo jeer marka aynu ka hadlayno vikinka inay ahaayeen dagaalyahano. Diinta masiixiga waxa Norwey lagu soo rogay taariikhdu markey aheyd 1000 kii. Diinta masiixigu waxey bedeshay diimahoodii hore iyo ilaahyadii ay caabudi jireen.
Midowgii Norwey iyo Dhenmark
Badhtamahii 1300 kii ayaa Denmarak waxey saameyn badan ku yeelatay Norwey. Laga bilaabo 1397 waxey Norwey midow la aheyd Denmarak iyo Iswiidhan. Midowgaas wuxuu lahaa boqor ka dhexeeyay. Ka dib Iswiidhan ayaa ka baxdey midowgii, laakiin midowgii Norwey iyo Dhenmarak wuxuu sii socday ilaa 1814. Siyaasada waxa laga maamulayay Denmark. Koobanheegan waxay ahayd xarunta dhaqanka ee midowga, noorwiijigu waxey wax ku akhriyi jireen ama wax ku qori jireen afka Dheynishka. Beeraleyda noorwiijigu waxey cashuurta siin jireen boqorka Denmark ee Koobanheegan joogey.
Sanadkii 1814 kii wuxuu ahaa sannad muhiim u ah taaariikhda noorwiijiga. 17 kii may ee sannadkaas ayaa Norwey samaysatey dastuurkeeda.
Waxaa jirey dagaalo badan oo Yurub ka jirey bilowgii 1800 kii. Waxa ka mid ahaa Ingiriiska oo dhinac ahaa iyo Faraansiiska oo dhinaca kale ahaa. Denmarak iyo Norwey waxey raacsanaayeen dhinaca Faransiiska, ka dib markii Faransiika laga adkaadey, ayey boqorkii Denmarak khasab ku noqotey inuu Norwey ku wareejiyo Iswiidhan oo la jirtey Ingiriiska.
Sannadkii 1814 ayaa midowgii Denmarak iyo Norwey u dhexeeyay buburey. Noorwiijiga qaar ka mid ahaa ayaa waxey rabeen in Norwey noqoto dal xor ah oo keligii taagan, 112 nin oo awood leh oo ka kala yimi qaybaha koonfureed ee dalka ayaa ku kulmey magaalada Eidsvoll ee gobolka Akershus. Waxeyna rabeen i iney halkaa ku qoraan dastuurka Norwey oo ah dal madaxbannaan. Laakiin waxa Norwey lagu khasbey iney la midoobaan Iswiidhan, bishii noofembar ayuu midowgii Norwey iyo Iswiidhan noqday mid dhab ah.
Midowga Iswiidhan wuu ka yara jilicsanaa kii Denmarak. Norwey wey sii haysatey distoorkeedii oo wax yar laga bedelay, waxa kale oo ey yeealtey ismaamul hoose. Siyaasada dibeda waxa laga maamulayay Iswiidhan, oo boqorka labada wadan wuxuu ahaa Iswiidhish
Kalgacal qaran iyo waxa noorwiijiga lagu garto
Sannadihii 1800 ayaa Yurub waxa sare u kacey xiisaha loo qabo farshaxanimada iyo dhaqanka taas oo la odhan karo ama loogu yeedhi karo (nasjonalromantikken). Waxa markaa muhiim noqotey in la tilmaamo waxa dal kastaba lagu garto, iyadoo weliba la weyneynayo oo la qurxinayo. Norwey waxa si gaar ah loogu amaaney dabeecad aad u qurux badan, iyo iyada oo bulsho beeraley ah loo aqoonsadey «summadda noorwiijanka».
Kalgacalka qaran waxa lagu muujiyey suugaan, farshaxanimo iyo muusik. Waqtigaas waxey dadka noorwiijigu aad u ogaadeen waxyaabaha lagu aqoonsado dalkooda. Dad badan waxey ku hanweynaadeen iney noorwiiji yihiin, sidaa darteed ayaa waxa xoogeysatey rabitaanka ah iney helaan madaxbannaani.
Dhawr boqol oo sanno midowgii Denmarak iyo Norwey kadib qoraalka luqada Noorwijigu waxey ahayd luqada Dhaynishka. Luqada qoraalka ah ee maanta loo yaqaano bokmål ayaa ah mid taas ka soo jeeda oo la horumariyay.
Waqtigaas qaranimo jacaylku (nasjonaromantikken) ayaa dad badani waxey rabeen in luqada Noorwiigu noqoto afnoorwijiiji oo aaney ka iman Dhaynishka. Luqad baadhaha loo yaqaan Ivar Aasen ayaa sidaa darteed safar ku soo marey dalka oo dhan waxaanuu soo ururiyey tusaalooyin ah lahjadaha dalka oo kala duwan, lahjadahaas ayuu ka sameeyey luqada Noorwiijiga ah ee qoran ee loo yaqaano noorwiiga cusub (nynorsk).
Labada luqadood ee nynorsk iyo bokmål-ka waxey wax badan kobceen ilaa sannadadii 1800kii, laakiin weli Norwey waxey leedahey laba nooc oo luqadood, iyo weliba Samisk iyo Kvensk.
Badhtamihii xilligii taariikhdu ey aheyd 1800 kii boqolkiiba 70 dadka Noorwiijigu waxey degenaayeen tuulooyinka. Waxey inta badan ka shaqeyn jireen beeraha iyo kalluumaysiga. Noloshu dadka qaar badan aad ayey ugu adkeyd. Dadku wey bateen mana jirin dhulbeereed iyo shaqo ku filan dhamaantood.
Isla markaa waxa dhacay isbedel ka dhacey magaalooyinka. Wershado badan ayaa ka bilaabmey magaalooyinka, dad badana ayaana kasoo guuray tuulooyinka oo u soo guuray magaalooyinka si ay u helaan shaqo.Nolosha magaaladu wey ku adkayd qoysas badan oo shaqaale ah. Waqtiga shaqada oo dheeraa, iyo xaalada nolosha guryaha oo xumeyd. Qoysasku had iyo jeer waxey lahaayeen carruur badan, oo caadi ayey aheyd in qoysas badan ey wada degaan guri aad u yar. Si qoysku u noolaado waxey noqotey in carruur badani ey ka shaqeeyaan wershadaha. Sannadihii u dhexeeyey 1850 kii ilaa 1920 kii ayaa 800 0000 oo noorwiiji ahi u guureen Ameerika.
Dal xor ah oo madaxbannaan
1905 tii ayaa midowgii Norwey iyo Iswiidhan uu dhamaadey. In badan ayaa waxa ka dhex socday is afgaranwaa siyaasadeed golaha shacabka Noorwiijiga iyo boqorka Iswiidhan, oo bilowgii 1900kii waxaa soo badatay rabitaanka in dad badan oo Noorwiiji ahi ey rabeen in Norwey noqonto dal xor ah oo madaxbannaan.
7dii juun 1905tii ayaa golaha shacabku wuxuu ku dhawaaqey inaanu boqorka Iswiidhan aheyn boqorka Norwey, isla markaana uu midowgii Iswsidhan dhammaadey. Iswiidhan arrintaa aad ayey uga hortimi, oo waxey aad ugu sigatey in labada dal ee Norwey iyo Iswiidhan uu dagaal ka dhex qarxo. Laba aftiyood oo dadka Noorwijiiga ah laga qaadey isla sannadkaas ayaa go’aanku wuxuu noqdey in midowgii Iswiidhan uu dhamaadey, iyo in dawlada cusub ee Norwey ey noqon doonto boqortooyo.
Boqorkii Denmark, Carl ayaa loo doortey boqorka Norwey. Waxaanuu qaatay magac Noorwiiji ah Kong Haakon 7. Wuxuu boqorka Norwey ahaa1905tii ilaa markuu dhintey 1957 kii.
Qeybtii hore ee qarnigii 19aad
Dhammaadkii 1800 ayaa Norwey waxey bilowday iney ka faa’iideysato awooda biyaha oo ey ka dhaliso tamar/koronto. Iyada oo taas laga faa’iideysanayo ayaa waxa la sameeyey shirkado badan. Baahidii shaqaalaha loo qabey ayaa korodhey, oo magaalooyinkiina wey sii weynaadeen. Waxa jirey sharciyo u gaar ah oo ilaalinaya in awooda tamarta biyaha ey ahaato mid qaran.
Sannadadii 1914 ilaa 1918kii waxa yurub ka qarxay dagaalkii koowaad ee dunida. Norwey dagaalkaas doorweyn kamey ciyarin, laakiin xagga dhaqaalaha ayaa aad looga dareemayay halkan. Intii dagaalku socday waxa la waayey badeecadaha qamadiga, kafayga iyo sonkorta, waxaana la soo rogay in la yaryareeyo badeecadahaas (kaadhiin).
Sannadadii 1930 waxa jirey dhaqaale burbur ku dhacey Yurub iyo Waqooyiga Ameerika. Dad badan ayaa shaqo la’aani ku dhacdey oo guryahoodii waayey. Iyadoo Norwey aaney sidaa u xumeyn sida meelaha kale ee dunida, hadana xiligaasu waa «waqtigii adkaa ee 1930 dii».
Dagaalkii 2aad ee adduunka 1939/1940‒1945
Dagaalkii labaad wuxuu bilaabmey siimtambar 1939kii, markii Jarmalku qabsadey dalka Booland. Norwey waxa ciidamada Jarmalku qabsadeen 9 abriil ee 1940kii.
Dhawr todobaad ayuu socdey dagaalkii lagu qabsadey Norwey. Boqorka iyo dawladu waxey u carareen Ingiriiska waxaaney dagaalka ka sii wadeen halkaas si Norwey loo xoreeyo. Norwey markaas waxa xukumayey dawlad Jarmalka la saaxiib ah oo aan si dimuquraadi ah loo soo dooran, dawlada waxa hogaaminaayey Vidkum Quisling.
Dad badan oo raacsanaa mucaarkaas, ayaa dalka ka cararey. Ilaa 50 000 oo Noorwiiji ah ayaa u cararey Iswiidhan mudadii dagaalkii labaad ee dunidu socdey.
Waqooyiga Norwey, dad badan ayaa la diley, inta badan Finnmark iyo Nord-Tromsna waa la burburiyey ka dib markii Jarmalku dib uga soo guurey aagaggaas. Amarada Hitler bixiyey ayaa ah in dhismayaasha iyo kaabayaasha badankooda la gubo si looga hor tago in ciidamada Soofiyeeti aaney u adeegsan agabkii halkaas ka jiray.
Markii dabme Jarmalka ayaa aagag badan ku jabey oo bishii Mey ee 1945 ayuu Jarmalku isdhiibey. Wadar ahaan, qiyaastii 9500 oo noorwiiji ah ayaa dagaalkaas u dhintey.
Norwey iyo waqtiga casriga ah
Dagaalka kadib waxey noqotey in dalka dib loo dhiso. Badeecad yaraan baahsan ayaa ka jirtey dalka oo guryo ku filan dadka mey jirin. Wadashaqeyn iyo iskaa-wax- qabso ayaa dadku ku dhaqaaqeen si wadanka degdeg loogu dhiso. Dawladu waxey adkaysey isticmaalka dhaqaalaha iyo badeecada.
Mudo yar ka dib waxaa la sameeyey Qaramada Midoobey (FN). Ujeedada ugu weyne ee loo sameeyey Qaramada Midoobey waxey ahayd in laga shaqeeyo nabada iyo cadaaladda aduunka. Norwey waxey ka mid aheyd kuwii ugu horeeyay ee ku biirey Qaramada Midoobay noofambar 1945. Xoghayihii guud ee Qaramada midoobay ee ugu horreeyey Trygve Lie, wuxu ahaa noorwiiji
Mareykanka ayaa deeq dhaqaale u fidiyey dalalka Yurub dagaalkii ka dib. Deeqdan dhaqaale ayaa la magac baxdey kaalmadii qorshihii-marshall (Marshall-planen), deeqdan ayaa lagu xidhey shuruudo dhaqaale iyo siyaasad dalalka qaatey. Norwey waxey ka qaadatey maraykanka saddex bilyan oo koroone oo kaalmo ah.
1949 ayaa Norwey iyo koob iyo toban dal oo kale waxey saxeexeen heshiiskii Atlaantikada. Kaas oo markii dambe uu ka dhashay heshiiskii difaaca milatariga ee wadamada reer galbeedka (NATO). Heshiiskan saxiibtino ee u dhexeeyay dalka reer galbeedka Yurub iyo Mareykanka ayaa ilaa iyo hadda socda ama jira.
Sanaadahii 1950 iyo 1960 kii dhaqaalaha Norwey aad ayuu u wanaagsanaa, dawladuna waxey samaysey isbedelo badan oo la rabey in lagu siiyo dadweynaha nolol wanaagsan.
Sannadahii 1960 shirkado badan ayaa rabey iney ka baadhaan shiidaal iyo gaas badaha Norwey. Sidii 1950 ey dawladu uga masuul ahayd awooda tamarta ee biyaha laga dhaliyo ayey shiidaalkana dawladdu u lahayd, laakiin shirkadaha gaarka loo leeyaheyna waxa loo ogolaadey iney iibsadaan xuquuq ay ku baadhaan, qodaan oo ka soo saaraan shiidaal meelo gaar ah iyo waqti xadidan. 1969kii ayaa shiidaalkii ugu horeeyey laga heley badda Waqooyi ee Norwey (Nordsjøen), laga bilaabo waqtigaas ilaa iyo maanta waxey Norwey noqotey dal shiidaal leh. Norwey waxey maanta ka mid tahey dalalka aduunka ugu bada nee shiidaalka dhoofiy, wershadaha shiidaalkuna waxey qiime weyn ugu fadhiyaan dhaqaalaha noorwiijiga.
Kacdoonkii dadweynuhuna wuxuu macno weyn u lahaa horumaka iyo Noorweyda maanta cusub, gaar ahaan dhaqdhaqaaqii uruka shaqaalaha iyo haweenka oo laf dhabar u ahaa. Dhaqdhaqaaqa ururka shaqaaluhu wuxuu kasoo bilaabmay ilaa sanadkii 1600kii lakiin wuxuu si wanaagsan u habaysmay sanadkii 1880kii markaas oo shaqaale badan oo wershadaha ka shaqeeyaa ay samaysmeen shaqaduna furantay. 1920 waxay qayb wayn ka ahaayeen isbeddelkii dhacayay waqtigaas. Ururka shaqaaluhu wuxuu u soo halgamey sidii shaqaalaha noloshooda loo wanaajin lahaa, taas oo ay kamid ahayd waqtiga shaqada oo la soo gaabiyo, in la sugo nabadgelyadooda goobaha ay ka shaqaynayaan, inay helaan caymis dhaqaale marka ay xanuunsadaan , xaq inay u helaan lacag marka shaqo beelaan.
Dhaqdhaqaaqii haweenku wuxuu u dagaalamayay xuquuqda dumarka ee bulshada dhexdeeda, sinaanta labada jinsi iyo ragga iyo dumarku inay fursad isku mid ah helaan. Xuquuqda iney dumarku u helaan iney wax furaan, iney ilmaha iska xidhi karaan, inay ilmaha iska soo ridi karaan iyo in dumarku xaq u yeeshaan go’aanka jidhkooda, waxey ahayeen arrimaha muhiimka u ahaa dhaqdhaqaaqa haweenka. Maanta waa loo wada simanyahay waxbarashada iyo shaqada, hantida ma guurtada iyo dhaxalka, daaweynta iyo daryeelka caafimaadka ragga iyo dumarka,
Sanadkii 1978 waxaa la sameeyay sharciga uur-joojinta [Sharciga ilma iska soo ridadda]. Sharcigu wuxuu siinayaa haweenka xuquuq iney ilmo iska soo riddaan kahor todbaadka 13aad ee uurka. Maanta waxaa jirta xuquuq in loo siman waxbarashada iyo shaqada, lahaanshaha iyo dhaxalka, daawada iyo caafimaadka wanaagsan dumarka iyo raga labadaba.
Norwey maanta waa dimuqraadi leh daryeel aad u sarreeya. Inta badan dadka Norwey joogaa dhaqaale fiican bay haystaan, bulshaduna heer aqoon sare ayey leeyihiin. Rag iyo dumar ba way shaqeeyaan. Bulshada waxa hoggaamiya qoddobo sharci iyo heshiisyo kuwaas oo suga bulshada waxbarashadeeda, kaalmada caafimaad iyo kaalmo dhaqaale marka loo baahdo.
Tobankii sanno ee u danbeeyey si xawli ah ayey u horumartay teknoolajiyadu iyo qaybta dhaatadu (kombiyuutarku). Tani qiimo ayey u lahayd bulshada noorwiijanka. Waxa ay abuuraysaa shaqooyin badan, wixii laga shaqeynayey oo isbedela, iyo noloshii gaarka ahayd ee dadka oo inta badan isbedesha iyana.
Tobankii sanno ee ugu danbeeyey Norwey waxa ay isu bedeshay bulsho dhaqan badan oo kala jaad ah leh.